၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာ ကမ္ဘာကြီး ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားမလဲ - Xinhua News Agency
၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာ ကမ္ဘာကြီး ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားမလဲ
ကမ္ဘာကြီးသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ကို နှုတ်ဆက်ရန် ပြင်ဆင်ရတော့မည်ဆိုသည့်အခါ သိသာထင်ရှားလှသော မေးခွန်းတစ်ခု ထွက်ပေါ်လာပါသည်။ ထိုမေးခွန်းက “၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာ ကမ္ဘာကြီးဟာ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့တူမှာလဲ” ဆိုခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
မြောက်များစွာသော မသေချာ မရေရာမှုများ
ကမ္ဘာတစ်ဝန်း COVID-19 ဖြစ်ပွားမှုအရေအတွက်သည် သန်း ၈၀ ကျော်သွားပြီဖြစ်သည်။ ကံကောင်းလှသည်မှာ ကာကွယ်ဆေးဖော်ထုတ်မှုနှင့် ကုသဆေးဝါးများကလည်း နှစ်သစ်တွင် ကြောက်မက်ဖွယ်ကပ်ရောဂါကို အဆုံးသတ်စေရန် ဆောင်ကြဉ်းလာမည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့ရှိ လင်ကွန်းအောက်မေ့ဖွယ်နေရာသို့ လာရောက်လည်ပတ်သူများကို တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
လတ်တလောတွင် ဗိုင်းရပ်စ်က ကမ္ဘာကြီးကို ဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေသဖြင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအများအပြားတွင်လည်း လူအများအပြား ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းကို စတင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ဘရာဇီးနိုင်ငံနှင့် တူရကီနိုင်ငံတို့တွင် လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများနှင့် ရလဒ်များတွင်လည်း တရုတ်နိုင်ငံထုတ် ကာကွယ်ဆေး၏ အစွမ်းထက်မှုကို အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို့ရှိ ဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုတွင် နှာခေါင်းစည်းတပ်ဆင်ထားသော အမျိုးသမီးတစ်ဦး လမ်းလျှောက်နေသည်ကို တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
သို့သော်လည်း ဗြိတိန်၊ တောင်အာဖရိနှင့် နိုင်ဂျီရီးယား စသည့်နိုင်ငံများတွင် ဗီဇပြောင်း COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်သစ်အပေါ် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။နိုဗယ် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို တိုက်ဖျက်ရန် “နောက်ဆုံးလက်နက်” အဖြစ် ကာကွယ်ဆေးကို အများအပြား မျှော်လင့်ထားသော်လည်း ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ကပ်ရောဂါအား ထိထိရောက်ရောက် ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းရှိမရှိကို မသေချာမှုများ ရှိနေသလို ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုနှုန်း၊ ပဋိပစ္စည်းကာကွယ်မှု ကာလနှင့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဗီဇမျိုးကွဲအသစ်များ စသဖြင့် မသေချာမရေရာမှုများလည်း ကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
အီတလီနိုင်ငံ ရောမမြို့ရှိ လူသူကင်းမဲ့နေသည့် လမ်းတစ်နေရာကို တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ဟိုင်နန်ပြည်နယ်၊ ဟိုင်ခိုမြို့ရှိ ဟိုင်ခိုမယ်လန်နိုင်ငံတကာလေဆိပ်တွင် 5G အချက်ပြစနစ်ကို စမ်းသပ်နေသော ဝန်ထမ်းတစ်ဦးကို တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
“ကာကွယ်ဆေးတိုးတက်မှုက ကျွန်တော်တို့အားလုံးကို စိတ်ဓာတ်တက်ကြွစေတယ်။ ပြီးတော့ အခု ကျွန်တော်တို့ ဥမင်အဆုံးက အလင်းရောင်ကို စတင်မြင်တွေ့နိုင်ပါပြီ။ ကပ်ရောဂါပြီးသွားပြီဆိုတဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေ မြင့်တက်လာတာတွေကိုတော့ WHO (ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့) အနေနဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မိတယ်” ဟု WHO ညွှန်ကြားရေးမှုးချုပ် Tedros Adhanom Ghebreyesus က ယခုလအစောပိုင်းတွင် ဂျီနီဗာ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ပြောကြားခဲ့သည်။ ကပ်ရောဂါက ခရီးရှည်ကြီးကို ဖြတ်သန်းနေရဆဲပါပဲဟု ၎င်းက သတိပေးခဲ့သည်။
ယခုနှစ်တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ ရှုပ်ထွေးလှသော သမ္မတရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက် ရွေးကောက်ခံသမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန် (Joe Biden) သည် ဇန်နဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် သမ္မတ တာဝန်ထမ်းဆောင်တော့မည်ဖြစ်ပြီး ဗိုင်းရပ်စ် တိုက်ဖျက်ရေးနှင့် စီးပွားရေးနာလန်ထူရေးများက ၎င်းအစိုးရအဖွဲ့အတွက် ထိပ်တန်းဦးစားပေးအရာများဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။
သို့သော်လည်း အစိုးရသစ်အနေဖြင့် နက်ရှိုင်းသော ခက်ခဲကွဲပြားခြားနားသည့် လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ဆီသို့ ဆက်လက်ဦးတည်နေသည်။ ကပ်ရောဂါတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် စီးပွားရေးကျဆင်းခြင်း၊ ကြွေးမြီများပြားခြင်း၊ နှစ်ပါတီပြိုင်ဆိုင်မှုများကြောင့် အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲမှာလည်း လာမည့်နှစ်ဆီသို့ ဆွဲယူသွားဖွယ်ရှိနေသည်။
ယူကရိန်းနိုင်ငံ အကြပ်အတည်းပေါ်ပေါက်လာပြီးနောက် ရုရှားနိုင်ငံနှင့် အနောက်နိုင်ငံများအကြား ဆက်ဆံရေးသည် အကျဘက်ရောက်နေသလို အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ အခြားသောအနောက်နိုင်ငံများနှင့် ရုရှားနိုင်ငံကြား ဆက်ဆံရေးအခြေအနေမှာလည်း ရုရှားအား အမေရိကန်၏ လုံခြုံရေးအပေါ် “အကြီးမားဆုံးခြိမ်းခြောက်သူ” အဖြစ် ဘိုင်ဒန်၏ နှစ်သစ်အတွက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုဖော်ပြချက်ကြောင့် တင်းမာမှုမှာ ဆက်လက် တည်ရှိနေအုံးမည်ဖြစ်သည်။
အီရန်နိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်းတပ်မှူး Qasem Soleimani နှင့် ထိပ်တန်း နျူကလီးယား သိပ္ပံပညာရှင် Mohsen Fakhrizadeh တို့ လုပ်ကြံခံခဲ့ရသည့် ပဋိပက္ခဒဏ်ပိနေသော အရှေ့အလယ်ပိုင်းတွင်မူ တူရကီနိုင်ငံသည် အရှေ့ပိုင်း မြေထဲပင်လယ်ဒေသနှင့် တင်းမာမှုများကြောင့် ဂရိနှင့် အီဂျစ် နိုင်ငံများနှင့် ဆက်ဆံရေးနှင့်အတူ လစ်ဗျားနိုင်ငံနှင့် Nagorno-Karabakh ဒေသရှိ ပဋိပက္ခတွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး အဆိုပါ ကသောင်းကနင်းအခြေအနေများအားလုံးက နှစ်သစ်ဆီသို့ ဆက်လက်ရောက်ရှိသွားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် ဗြိတိန်နိုင်ငံနှင့် ဥရောပသမဂ္ဂ (EU) တို့သည်အချိန် ၉ လကြာ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးတွင် လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်တစ်ခုကို အခိုင်အမာရရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်တွင် ကျရောက်မည့် ဥရောပမှ ဗြိတိန်ထွက်ခွာရေး (Brexit) ချောက်ကမ်းပါးစွန်းကို ရှောင်လွှဲရန် အသေအချာအထောက်အကူပြုမည် ဖြစ်သော်လည်း ယင်းမှာ အားလုံးအတွက် ခရစ္စမတ်လက်ဆောင်တစ်ခုတော့ မဟုတ်ပေ။ နှစ်သစ်တွင် ဗြိတိန်နိုင်ငံနှင့် အီးယူသည် “မိတ်ဆွေဟောင်းများ” အဖြစ် စိန်ခေါ်မှုများ ကျန်ရှိနေဦးမည်ဖြစ်သည်။
စီးပွားရေးအနေဖြင့် ကြည့်ပါက ကပ်ရောဂါသည် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးကို စီးပွားပျက်ကပ်အဖြစ် တွန်းပို့စေခဲ့သည်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းဖြစ် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများနှင့်အတူ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးသည် ကာကွယ်ဆေးများ၏ မသေချာသော အကျိုးဆက်များ၊ တစ်ကျော့ပြန်ကူးစက်မှုများနှင့် ကြွေးမြီမြင့်တက်မှုများ အပါအဝင် အန္တရာယ်များကြားမှ လာမည့်နှစ်တွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်၏ အရိပ်မှ ဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ်ထွက်လာဖွယ်ရှိသည်။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာက ထုတ်ပြန်သည့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ရှုမြင်သုံးသပ်ချက်တွင် နိုင်ငံတကာငွေကြေး ရန်ပုံငွေ (IMF) က ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ခန့်မှန်းချက်မှာ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးကျဉ်းမြောင်းမှု ၄.၄ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရှိလာပြီး ဇွန်လက ခန့်မှန်းထားသည်ထက် အနည်းငယ်ဆိုးရွားကြောင်း စိစစ်သုံးသပ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ စိစစ်သုံးသပ်မှုကတော့ “ဒုတိယသုံးလပတ်အထိ နိုင်ငံကြီးတွေရဲ့ ဂျီဒီပီပမာဏက ခန့်မှန်းထားတဲ့အတိုင်း အနုတ်လက္ခဏာမဖြစ်ခဲ့သလို တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ပြန်လည်တိုးတက်မှုကလည်း မျှော်မှန်းထားတာထက် ခိုင်မာလာခဲ့ပြီး တတိယသုံးလပတ်အတွင်းမှာ ပိုမိုလျင်မြန်တဲ့ ပြန်လည်နာလန်ထူမှု လက္ခဏာတွေဖြစ်ပါတယ်” ဟု IMF က ဆိုသည်။
သို့သော်လည်း “နိုင်ငံများစွာမှာ ဗိုင်းရပ်စ် အသစ်ပြန်ဖြစ်ပေါ်မှုတွေနဲ့ ရောဂါထိန်းချုပ်ရေး ဆောင်ရွက်ချက်တွေ လုပ်ဆောင်တာတွေဟာ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ပထမနှစ်ဝက်မှာ လဲကျရာကနေ ပြန်ထလာတဲ့ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအဟုန်ကို တန့်သွားစေခဲ့ပြီး အထူးသဖြင့် ဥရောပနိုင်ငံများစွာက မဝေးတော့သည့်ကာလမှာ ရလဒ်ထွက်ရှိမှုကို နှောင့်နှေးနိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း” ယခုလအစောပိုင်းတွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော စီးပွားရေးရှုမြင်သုံးသပ်ချက်၌ စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဖွဲ့ (OECD) က ပြောကြားထားသည်။
အချို့နိုင်ငံများတွင် ကာလတိုအတွင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ထိန်းချုပ်ရေး ပြန်လည်ဆောင်ရွက်မှုများက စီးပွားရေး နာလန်ထူမှုအရှိန်အဟုန်ကို ပြန်လည်ထိန်းချုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ကာလရှည်တွင်မူ ကပ်ရောဂါက ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအပေါ် ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ထိခိုက်လျက်ရှိသလို ကြွေးမြီများပြားလာခြင်း၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုအလားအလာကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခြင်းများ ကြုံတွေ့ရမည်ဟု လေ့လာသုံးသပ်သူများက ဆိုသည်။
ထို့ကြောင့် “ဒီကပ်ဘေး မြင့်တက်နေတာက ရှည်ကြာနိုင်သလို မညီမညာနဲ့ မသေချာမှုတွေ မြင့်တက်နေနိုင်ဦးမှာပဲ” ဟု IMF စီးပွားရေးပညာရှင် အကြီးအကဲ Gita Gopinath က October blog တွင် ရေးသားခဲ့သည်။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်သည် 5G တည်ဆောက်မှု ပမာဏများစွာ ရှိခဲ့သည့်နှစ်တစ်နှစ် ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတချို့တွင် 5G အခြေခံအဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေး ဖြည်းဖြည်းချင်းပြီးစီးခဲ့ပြီး 5G အပလီကေးရှင်းများသည် “အရာရာတိုင်းအတွက် အင်တာနက် ” ဆိုသည့် ခေတ်သစ်တစ်ခုပေါ်ထွက်လာမှု ဟောကိန်းထုတ်ရန် ရှုမြင်ထားသည့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်လည်း လွှမ်းမိုးမှု ဆက်လက်ကြီးမားနေဦးမည်ဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သောနှစ်က 5G သည် ၎င်း၏ စီးပွားရေး မိတ်ဆက်ခြင်း၊ နယ်ပယ်များစွာတွင် အပလီကေးရှင်းအသစ်များ ဖန်တီးခြင်းနှင့် ဒီဂျစ်တယ်စီးပွားရေး၏ဖွံဖြိုးမှုအတွက် အဓိက အုတ်မြစ်တစ်ခုအဖြစ် ဖြည်းဖြည်းချင်း တိုးတက်ခြင်း အရှိန်မြှင့်တင်လျက်ရှိသည်။
သာဓကအနေနှင့် တရုတ်နိုင်ငံသည် ယခုနှစ် နိုဝင်ဘာလအထိ 5G အခြေစိုက်စခန်း ၇၁၈,၀၀၀ တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင် ထိပ်တန်းအဆင့် 5G အပလီကေးရှင်းပုံစံများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဆက်စပ်နေသည့် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများမှာလည်း ကမ္ဘာ့ 5G ဈေးကွက်ကို တွန်းအားပေးနိုင်ရန် နည်းပညာ၊ စက်ကိရိယာများနှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်သော အဖြေရှာမှုများ၌ အကျိုးကျေးဇူးများ ဖွဲ့စည်းပုံဖော်လျက်ရှိပေသည်။
နှစ်သစ်တွင် 5G အပလီကေးရှင်းများ ချဲ့ထွင်ခြင်း၊ ၎င်း၏ မြင့်မားလှသောမြန်နှုန်း၊ လျင်မြန်စွာကွန်ပြူတာကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှု (ultra-low latency)နှင့် ၊အလွန်ကြီးမားသော ချိတ်ဆက်မှု သွင်ပြင်လက္ခဏာများက စက်မှုလုပ်ငန်း၏ ဒီဂျစ်တယ် အသွင်ကူးပြောင်းမှုကို အားကောင်းလာစေမည်ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် 5G သည် big data စင်တာများ၊ ဉာဏ်ရည်တုနှင့် လုပ်ငန်းသုံးအင်တာနက်အဖြစ် အခြေခံအဆောက်အအုံ အသစ်ကဲ့သို့ ထိရောက်စွာ ချိတ်ဆက်သွားမည်ဖြစ်ကာ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး နည်းပညာဆိုင်ရာ အသွင်ကူးပြောင်းမှုကို နားလည်သဘောပေါက်ရေးနှင့် ဒီဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းလဲမှုကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ရေး၊ ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုနှင့် အသိဉာဏ်တို့ကို အဓိကလမ်းကြောင်းများအဖြစ် ထိထိရောက်ရောက် အဆင့်မြှင့်တင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း industry insiders က သုံးသပ်ခဲ့သည်။ (Xinhua)
Yearender-World Insights: How the world will change in 2021
– It remains unclear whether the pandemic can be effectively controlled by 2021;
– Turbulence ahead with regions in the world facing different kinds of problems;
– Pandemic has severely hit the global economy, while “the ascent out of this calamity is likely to be long, uneven, and highly uncertain”
– The expansion of 5G applications, its ultra-high speed, ultra-low latency, and ultra-large connection characteristics, will empower the digital transformation of industries.
BEIJING, Dec. 28 (Xinhua) — As the world prepares to bid farewell to the year 2020, one question becomes glaringly evident: How will the world look like in 2021?
Though many are looking forward toavaccine as the “ultimate weapon” against the novel coronavirus, it remains unclear whether the pandemic can be effectively controlled by 2021, given uncertainties such as vaccination rates, duration of antibody protection, and new coronavirus variants.
“Progress on vaccines gives us allalift, and we can now start to see the light at the end of the tunnel. However, (the) WHO (World Health Organization) is concerned that there isagrowing perception that the COVID-19 pandemic is over,” WHO Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus toldaGeneva media briefing earlier this month.
In the United States, after this year’s complicated presidential election, President-elect Joe Biden will take office on Jan. 20, with the fight against the virus and economic recovery as his administration’s top priorities.
With ties between Russia and the West slumping toanew low following the Ukraine crisis, Russia’s relations with the United States and other Western nations could remain frosty in the new year considering Biden’s description of Russia as “the biggest threat” to U.S. security.
In the crisis-torn Middle East, senior Iranian commander Qasem Soleimani and top nuclear scientist Mohsen Fakhrizadeh were assassinated; Turkey was involved in conflicts in Libya and Nagorno-Karabakh, with its relations with Greece and Egypt at odds due to tensions in the Eastern Mediterranean — all revealingatrend of turmoil that could continue into the new year.
The trade deal will certainly help avoidaBrexit cliff edge on Jan. 1, 2021, but it is notaChristmas gift for all. Challenges remain as Britain and the EU part as “old friends” in the new year.
On the economic front, the pandemic has pushed the global economy intoarecession. With such efforts as vaccination, the global economy is expected to gradually emerge from the shadow of the coronavirus next year, despite risks including vaccines’ uncertain effects, the resurgence of infections andasurge in debt.
The revision, the multilateral lender said, is “driven by second quarter GDP outturns in large advanced economies, which were not as negative as we had projected; China’s return to growth, which was stronger than expected; and signs ofamore rapid recovery in the third quarter.”
However, “renewed virus outbreaks in many economies, and the containment measures being introduced, have checked the pace of the global rebound from the output collapse in the first half of 2020, and are likely to result in further near-term output declines, particularly in many European economies,” the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) said in its economic outlook released earlier this month.
Thus, “the ascent out of this calamity is likely to be long, uneven, and highly uncertain,” IMF chief economist Gita Gopinath wrote in an October blog.
The year 2020 is the year of large-scale 5G construction. With the gradual completion of 5G infrastructure construction in some countries, 5G applications will continue to grow in prominence in 2021, which seems to foretell the advent ofanew era of “Internet of Everything.”
Also, 5G, industry insiders say, will efficiently connect such new infrastructures as big data centers, artificial intelligence, and industrial Internet, and advance the realization of industrial technological transformation and optimization with digitalization, networking and intelligence as the main directions. Enditem
1- A medical worker preparesadose of the COVID-19 vaccine at the San Filippo Neri Hospital in Rome, Italy, Dec. 28, 2020. (Photo by Alberto Lingria/Xinhua)
2- People visit the Lincoln Memorial in Washington, D.C., the United States, on Dec. 27, 2020. (Photo by Ting Shen/Xinhua)
3- A woman wearingaface mask walks inashopping center in London, Britain, on Dec. 18, 2020. (Xinhua/Han Yan)
4- Photo taken on Dec. 24, 2020 shows an empty street in Rome, Italy. (Xinhua/Cheng Tingting)
5- A staff member tests 5G signal at Haikou Meilan International Airport in Haikou, south China’s Hainan Province, Dec. 24, 2020. (Xinhua/Pu Xiaoxu)
တရုတ်နိုင်ငံတွင် ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက်က COVID-19 အသစ်ထပ်တိုးအတည်ပြုလူနာ (၂၂) ဦး ရှိ၊ ၎င်းတို့အနက် (၁၂) ဦးမှာ ပြည်တွင်း ကူးစက်မှုများ ဖြစ်